मन्त्रीको पहलमा इजरायल जाने कामदारको हवाई भाडा प्रतिव्यक्ति ८० हजार घट्यो !
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » मन्त्रीको पहलमा इजरायल जाने कामदारको हवाई भाडा प्रतिव्यक्ति ८० हजार घट्यो !
शनिवार १ माघ, २०७८
काठमाडौ । राज्य वा पदमा रहेकाले गर्ने हो भने के नहुने रहेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको पहलमा इजरायलमा जाने कामदारले ठूलो रकम छुट पाएका छन् ।
उनीहरुले ८० हजार भन्दा कम हवाई भाडादर तिरे हुने भएको छ । कामदार लैजान प्रतिव्यक्ति ८० हजारभन्दा कम भाडादर प्रस्ताव गरेपछि एयर अरेबिया छनोट भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको हो ।
एयर अरेबियाले ५९ हजार ९ सय ९० रुपैयाँमा नेपाली कामदारलाई इजरायल लैजान तयार भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
रोजगारीमा जान अन्तिम छनौटमा एक हजार एक सय ७५ कामदार रहेका छन् । अब उनीहरूको नौ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत घट्ने भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल रोजगारीमा जाने कामदारबाट हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, पिसिआरसहित १ लाख ६५ हजार सात सय तोकेको थियो ।
जसमध्ये विभागले एक लाख ४० हजार रुपैयाँ हवाई भाडाबापत मात्रै खर्च तोकेको थियो । मन्त्रीको उपयुक्ति निर्णयले एक नागरिकको ८० हजार रकम बचत भएको छ । राज्यको नौ करोड ४० लाख रकम बचेको छ ।
विभागले नेपाल एयरलाइन्समार्फत कामदारलाई इजरायल पठाउन उक्त भाडादर निर्धारण गरेको हो । तर, श्रममन्त्री श्रेष्ठले हवाई भाडादर अत्यधिक भएको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सको विकल्प खोज्न निर्देशन दिएपछि विभागले टेन्डर आव्हान गरेको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार ‘नेपाल एयरलाइन्ससँग घटाउनका लागि आग्रह गरेपछि एक लाख २० हजारसम्ममा सहमत भएको थियो । तर, अन्य एयरलाइन्सले त्यसभन्दा कममा लैजान्छौं भनेपछि हामी टेण्डर आव्हान गर्न पुगको हौ उहाँले भन्नुभयो ।’
वैदेशिक रोजगार विभागले पुष ९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै एयरलाइन्स कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरेपछि आठ वटा एयरलाइन्स कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
जसमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य सी लिंक होलिडेज कम्पनीबाट प्रस्ताव गरेपछि एयर अरेबिया छनौट भएको हो । इजरायलस्थित पपुलेसन इमिग्रेसन र बोर्डर अथोरिटी (पिआइबिए) ले एक हजार एक सय ७५ जना कामदारलाई छनोट गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले माघ ५ गते पहिलो चरणमा एक सय २५ जना नेपाली युवालाई इजरायल उडाउने तयारी गरेको छ ।
विवाहको १८ वर्षपछि दुई छोरीहरूलाई बिचल्लि पारेर अलग भयो धनुष दम्पित
खोप र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सचेतना अपनाउन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन
प्रदेश २ को नाम मधेश र राजधानी जनकपुरधाम बहुमतले पारित
२४ घण्टाभित्र काठमाडौं उपत्यकामा थपिएका कोरोना संक्रमितको विवरण
चन्द्रागिरि हत्या प्रकरणमा नयाँ (अपडेट), दुई जना पक्राउ
गत २४ घण्टामा नेपालभर थपिए ६७३४ कोरोना संक्रमित
देउवा–प्रचण्डबीच भेटवार्ता, पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समिति बैठक बोलाउने सहमति
प्रधानमन्त्री देउवाले दुई–तीन दिनमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने
जनकपुरधाम प्रदेश २ को स्थायी राजधानी, पर्यो दुई तिहाइ बहुमतभन्दा धेरै मत